ခွငျကောငျ Nits | သင်သိပါရန်လိုအပ်အားလုံး
Lice Nits ရန် Boot ပေးခြင်း
ကြွက်သည်လူအများစုအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသောပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည်, များသောအားဖြင့်သူတို့ငယ်ငယ်တုန်းက. ဤကပ်ပါးကောင်များသည်ဆံပင်တွင်နေထိုင်ပြီး၎င်းတို့ကိုမဖယ်ရှားပါကထိုတွင်ခဏ နေ၍ ရှင်သန်နိုင်သည်. nits ၏နောက်ဆုံးသဲလွန်စများအားလုံးပပျောက်သွားစေရန်သေချာစွာဂရုတစိုက်ကုသမှုလိုအပ်သည်, ဒါမှမဟုတ် nits ပြန်လာကြလိမ့်မည်. အောက်ပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်ခြင်္သေ့ nits များကိုဖယ်ရှားပေးပြီးဆံပင်ကိုသန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်.
မီ nits ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ် ဦး ခေါင်းကနေ, သူတို့ပထမ ဦး ဆုံး unstuck ဖြစ်လာရပေမည်. ကြွက်များသည်သူတို့၏ nits များကိုဆံပင်ရင်းတွင်နေရာချကြသည်. ဤareaရိယာသည် ဦး ရေပြားနှင့်အနီးဆုံးဖြစ်သည်, ဒါကြောင့် nits များအတွက်နွေးနှင့်စိုထိုင်းသောပါပဲ. ခြင်ကောင်များနှင့်ရေအရောအနှောများကအခွံများကိုနေရာတွင်ထားရန်အတွက်ကြွက်များကအသုံးပြုသောကော်ကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မည်, သူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူအောင်. ၅ မှ ၇ ရာခိုင်နှုန်းသောရှလကာရည်၏သုံးပိုင်းပိုင်းသောအပိုင်းသုံးပိုင်းသည်ရေကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်. အရောအနှောကို ဦး ရေပြားနှင့်ဆံပင်တစ်လျှောက်လုံးကိုရယူပါ.
ပြီးတာနဲ့ရှလကာရည်နှင့်ရေအရောအနှော nits ဖြေလျော့ခဲ့သည်, သူတို့ကိုသံမဏိခြင်ကောင်နှင့်အတူထွက်ဖြီး. အများဆုံးမြင်သာမှုအတွက်တောက်ပသောအလင်းရောင်အောက်တွင်ပြုလုပ်ပါ. ဆံပင်ကိုပါးလွှာသောအပိုင်းများနှင့်ဖြီးခွဲပါ, ထိပ်ကနေစတင်. တစ်ခုချင်းစီကိုဖြီးပြီးနောက်, ဖြူကိုနွေးသောရေနှင့်ရှလကာရည်အပါအ ၀ င်နေရာတွင်စုဆောင်းထားသောမည်သည့် nits နှင့် lice ကိုမဆိုဖယ်ရှားပစ်ပါ. ဆံပင်၏အပိုင်းပြီးစီးခဲ့ဖြစ်လာသည်, ဖြစ်စေခြင်းငှါဆံပင်ကျစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြီးပြီပြီးပြီသောကဏ္ontoများသို့ရွေ့ခြင်းမှသန်းမှရှောင်ရှားရန်အတူတူကဆွဲထားဖို့ကလစ်နှိပ်ပါ.
ခြင်များနှင့်ခြင်များကိုထုတ်ပစ်ခြင်းသည်နာရီများစွာကြာနိုင်သည်, ဆံပင်ကြာကြာအထူးသဖြင့်ပါ. ပြီးတာနဲ့ပြီးပြီ, ဆံပင်ကိုပုံမှန်သို့မဟုတ်ဆေးခေါင်းလျှော်ရည်ဖြင့်ဆေးကြောပါ. အဆိုပါမြင်းနေဆဲပြန့်နှံ့ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်, ဒါကြောင့်ဖယ်ရှားရေးကာလအတွင်းဝတ်ဆင်ခဲ့ကြသောမည်သည့်အဝတ်ကိုလျှော်ဖို့ရေပူကိုသုံးပါ, လက်သုတ်ပုဝါ, နှင့်ခြင်္သေ့ဖြီး. လွတ်မြောက်နိုင်သည့်ခြင်များနှင့်အပေါက်များကိုစုပ်ရန်သန့်ရှင်းရေးtheရိယာကိုဖုန်စုပ်စက်ဖြင့်သွားပါ. နိုက်နှင့်ကြွက်ဆို့ဆံပင်များနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသောအခြားလူများက၎င်းတို့တွင်ရှိနိုင်သည်, ဒါကြောင့်လည်းသူတို့ရဲ့ဆံပင်စစ်ဆေးသေချာပါစေ.
ပိုက်ဆံ, ဦးထုပ်, အဝတ်အစား, ခေါင်းအုံး, အိပ်ရာခင်းများကိုရေပူတွင်ဆေးကြောသင့်သည်, သို့မဟုတ်အခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်, ၎င်းကိုအိတ်တစ်လုံးထဲထည့်ပြီးခြင်္သေ့များကိုသတ်ရန်တစ်ရက်ခဲသည်. ပရိဘောဂနှင့်ကော်ဇောများကိုကောအတွက်သန့်ရှင်းနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ဒီဒေသများအတွက်ကောနှင့်၎င်းတို့၏ nits ၏ရှင်သန်မှုများအတွက်အထူးသဖြင့်စံပြမရှိကြပေ, ဒါဆိုသူတို့သေရင်သူတို့သေမှာပဲ.
ဆံပင်တွင်အခွံများပိုမိုများပြားလာခြင်းနှင့်ပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်းတို့မှလွဲချော်သောမည်သည့်အစက်များမှကာကွယ်ရန် ၇ ရက်အတွင်းပြန်လည်ဖယ်ရှားခြင်းကုသမှုကိုပြုလုပ်ရမည်. ထိုရက်သတ္တပတ်နှစ်ကြိမ်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. ဆန္ဒရှိလျှင်, Lice နှင့် nits များလာခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဆံပင်ကိုတို။ ဖြတ်နိုင်သည်. ခြင်္သေ့သည်ပုန်းရှောင်စရာနေရာမရှိ၊, သူတို့ကပိုပြီးသင့်လျော်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအပေါ်ကိုရွှေ့ပါလိမ့်မယ်.
အဆိုပါခြင်္သေ့ nits နောက်ဆုံးတော့သွားပြီသောအခါ combing နှင့်အဝတ်လျှော်အားလုံးသည်တန်ဖိုးရှိပါလိမ့်မယ်. ဤပိုးမွှားများရှိသည်ဖို့ရှက်စရာဖြစ်နိုင်သည်ပေမယ့်, သင့်လျော်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြုမိလျှင်, သူတို့သည်အတိတ်ကာလသာဖြစ်လိမ့်မည်.